Guddiga Heesta Calanka Puntland oo Soo Bandhigay Shuurdaha Heesta lagu Xulayo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Guddiga Heesta Calanka Puntland oo Soo Bandhigay Shuurdaha Heesta lagu Xulayo
Gudoomiyaha Guddiga loo Xilasaaray inay soo xulaan heesta uu yeelanlahaaÂ Calanka cusub eeÂ Puntland, Wasiiraka Dimuquraadiyeenta iyo Arrimaha Federaalka Dowlada Puntland, Dr.Cabdi Xasan Jimacaale ayaa maanta Saxaafa kula hadalay xarunta Madaxtooyada asagoo soo bandhigayÂ Shuuradaha Lagu Xulaayo haysta Calanka Puntland.Â
Dr.Cabdi Xasan Cawaale ayaa Sheegay inÂ gudiga loo xilasaaray heesta calanka ay ku xuli doonaan 5 qodob oo kala ah sidan:
1-Heesa Calanka Puntland Waa inay ahaato Mid Katurjumaysa Himilada Dadwaynaha reer Puntland Islamarkaana tilmaamaysaÂ Calanaka cusub qaybaha uu Ka kooban yahay.
2- Waa in Heesta uu tartamuhu soo Gudbinaayo Mireheeda ay ahaadaan Af-Soomaali aan Baraxanayn.
3- Waa inay Heesta Dulucdeeda ay yihiin Kuwo Kooban isuna Miisaaman, Islamarkaana Maskaxda Lagu hayankaro oo aynaqoto mid si fudud ay dadku u xifdin karaan.
4- Tartamah haysta Calanka soo gudbinaaya Waa inuu usoo yeelaa Laxan iyo muusik (Music).
5- Tartamaha waa inuu si faseexa ah uu heesata Calanka uu gu soo duubaa cajlada si loo Dhagaysto markay qiimayntu socoto.
Tartamayaasha doonaya in ay heesta Calan u tartamaan, Waxay Heesaha usoo gudbinayaan Gudiga Xulitaanka Heesata Calanka ay dowlada Puntalnd u xilsaartay, kuwasoo Ka kooban 5 xubnood oo horayna iyagu loogu magacaabay inay soo xulaan Astaanta Dowlada, Calanka iyo heestiisa.
Guddigan oo ay horey BaarlamaankuÂ ay dibÂ ugu soo celiyeen heestii ay calanka horey ugu xuleen oo ahayd “…Kudayo Puntland…”
Tartanka Heesta calanka ayaa waxa uu bilaabanayaa 1da bisha April waxayna ku eg tahayÂ soogudbinteedaÂ 20 bisha April.
Guddigaan ayaa waxaa dib ugu soo magacaabay inay soo xulaan heesta calanka Puntland, Madaxwayane kuxigeenka Puntland ahan sii Hayaha Xilka Madaxwaynaha Gen. C/samada Cali Shire.
Ugu danbayntii gudoomiyaha Gudiga ayaa waxaa uu Sheegay in cidii Keeni karta heesataan Xafiiska gudigan ay ku hawlgalyaan oo ah Xarunta Madaxtooyada Puntland ee Garowe ay gacanta ka keenaan, cidii kalena ay ku soo gudbiyaanÂ Emailka ah: Heesta2010@gmail.com
Maxamed Saciid Yuusuf
Garowe, PL Somalia